အီတလီ - မြင့်လမ်းနှင့်နေ့စဉ်နှစ်ဦးစလုံးဖက်ရှင်၏မွေးရပ်မြေ, ကလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အဝတ်အစားများအီတလီစတိုင် - ဤလူအပေါင်းတို့သည်ဥရောပမိန်းမတို့အဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းလောကဓာတ်လုံးကိုအဘို့မသာတစ်ဦးကိုကိုးကားသည်။ စိတျဓာတျနဲ့လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုံးကို - စားဆင်ယင်ဒီစတိုင်ကိုသာသနျ့နဲ့ကြော့ရှင်း, ဒါပေမယ့်လည်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေါင်းစပ်။ သငျသညျအစဉျအမွဲအီတလီမြို့ကြီးများ၏လမ်းမများပေါ်တွင်ပါပြီလျှင်သင်ဒီ feature ကိုသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အီတလီအဝတ်အစားကအရမ်းရိုးရှင်းအဆင်ပြေပြေနဲ့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်မိန်းမပုဂ္ဂိုလ်ရေး stylist ခဲ့လျှင်ကြောင့်, ဒါကြော့ကြည့်ကြောင်းထင်ရပေသည်။ , အီတလီဝတ်စားဆင်ယင်မခက်ခဲနားမလည်နှင့်အရှင်သေချာပေါက်ကြီးစွာသော couturier ကနေအဝတ်နှင့်အတူဇိမ်ခံဖက်ရှင်ဆိုင်များမှဘဏ္ဍာရေးလက်လှမ်းရှိသည်မဟုတ်ဖို့ဘယ်လိုများ၏သိပ္ပံ။
အီတလီ၏ဆောင်းဦးရာသီ၌ထဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီလမ်းများပေါ်တွင်အီတလီစတိုင်အကြမ်းဖက်အရောင်ပွင်အခါနွေဦး, အပြင်, ယခုနှစ်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုမှာတခါမြင်နိုင်ပါသည် - အဝတ်ကျတှေ့။ ဂျော်ကီ ဟာဖနောင့်ခြင်းမရှိဘဲဖိနပ် သို့မဟုတ်ဖိနပ် (အီတလီဆောင်းဦးရာသီငါတို့ထက်ပူနွေးဖြစ်ပါတယ်), ဖန်စီဘောင်းဘီ ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်ဆင်မြန်း, အကျီနှင့်ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များ, အရာမပါဘဲ - လက်အိတ်, scarves, shawls, အိတ်။
သာမန်မြို့နေထိုင်သူစဉ်းစားခြင်းဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်, အီတလီနွေရာသီဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်။ အီတလီ - ထိုစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသားတပါးအမြိုးသားတစျဦး, နွေရာသီအတွက်ဒါ, ဒီအင်္ဂါရပ်အဝတ်အစားတွေမှာသူ့ဟာသူချွတ်တငျပွ။ ဤတွင်နှင့် Mini-ဘောင်းဘီတိုများနှင့်ပွင့်လင်းအနားအရှည် Maxi နှင့်ခေတ်မှီထိပ်နှင့်တီရှပ်များနှင့်အတူ sundresses ပေးသော Stubby ။ ဖိနပ် spikes မရှိဘဲများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်နွေရာသီမကြာခဏခြေနင်း၏ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီလမ်းများရဲ့ style ၏နောက်ဆုံးရုပ်ပုံရှင်းလင်းဖို့, ကအီတလီရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဆောင်းရာသီ outerwear လက်တွေ့ကျတဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းကြော့သာဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်လူကြိုက်များသားမွေးခြင်းနှင့်သားရေ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖိနပ်နှင့်တစ်ဦးဖနောင့်ခြင်းမရှိဘဲ, ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတော်နှင့်စတိုင်ကငျးမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဖက်ရှင်အီတလီဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုများ၏သိပ္ပံ, တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ အဓိကအင်္ဂါရပ် - အလှအပ, လိင်နှင့်တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းနှင့်အတူလက်တွေ့ကျပြီးအဆင်ပြေတစ်ဦးအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်။
သင့်ရဲ့နွေဦးဗီရိုမျိုးစုံ6အဝတ်ကို
ဘဲလေးကသမား 2015 မော်ဒယ်တစ်နှစ်
ဖက်ရှင် Sneaker 2016
ဒင်ဗာမြို့မှ Jean - နွေရာသီ 2014
M.Reason - နွေဦး 2016
2015 ခုနှစ်တွင်ရှည်သောဆံပင်ပေါ် Bang
Chanel Sneaker 2014
ကိတ် Beckinsale Len Uayzmanom နှင့်အတူကွာရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်
ဤရွေ့ကားထုပ်ကိုသင်တက်အားပေးစရာအလျင် Hedgehog ရှိသည်!
အဆိုပါ mammary gland အတွက်အကျိတ်
40 နှစ်ကြာမျက်နှာကိုအဘို့မုန့် - အဆင့်
ပန်းကန် puff pastry - အချိုပွဲများနှင့် savory မုန့်ဖုတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ကင်ဆာရိုက်နှက်သူကို 11 ကြယ်များ
ငါမိုးအုံ့နေ့၌ tan ရနိုင်သလား?